दिमागकाे क्षमता बढाउन विहान यसरी उठ्नुहाेस्
कहिलेकांही कुनै अनुहार देखेजस्ताे लागेकाे हुनसक्छ तर हामीले त्याे अनुहारकाे नाम बिर्सिन्छाैँ । हामीले कहिलेकांही भनेका हुन्छाैँ- मनमा आयाे मुखमा आएन । खासमा याे हाम्राे स्मरण शक्ति कमजाेर भएकाले हाे । भनिन्छ, उमेर बढ्दै जाँदा दिमागकाे क्षमता घट्दै जान्छ ।...
भात खाइखाइ स्लिम बन्न मन छ भने अपनाउनुहोस् यी फर्मूला
एजेन्सी– आफ्नो मोटो शरीरलाई फिट बनाउने चाहना कसको पो नहोला र ? हुन पनि हामीमध्ये धेरैले आफ्नो शरीरलाई फिट बनाउने चाहनामा भात खान छोडिरहेका पनि हुनसक्छौँ । एशियाली देशमा त झन् यो क्रम बढी हुन्छ । किनकि एशियामा सेतो चामलको...
स्वमूत्रपान स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ?
एजेन्सी– हिन्दूहरूले गोमूत्र (गहुँत)लाई पवित्र मानेर प्रयोग गरेको त हामीले प्रत्यक्ष देखे/भोगेकै कुरा हो । तर, मानिसकै पिसाब पिउने कुरा मात्र गर्दा पनि अधिकांशलाई घिन लाग्न सक्छ । तर, कतिपय मानिसहरू स्वमूत्रपान गर्दा स्वस्थ भइने भन्दै त्यसको प्रयोग गर्दै आइरहेकै...